Samaynta Kiiska WordPress ee Ganacsiga: Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka | Martech Zone
Samaynta Kiiska loogu talagalay WordPress ee Ganacsiga: Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Jimco, Juun 24, 2016 Talaado, Nofeembar 24, 2020 Douglas Karr
WordPress.org ku koraya ganacsiga, oo loo adeegsado dhammaan warshadaha waaweyn maalmahan. Nasiib darrose, ganacsiyada waaweyn wali wey dhaafaan WordPress sababo la xiriira sumcad ahaan meherad yar ama madal-madax-bannaan oo wax lagu qoro. Sanadihii la soo dhaafay, heegan ah WordPress maareeyay martigelinta dhufto ee isbeddelay. Waxaan u haajirnay Flywheel waayo, Martech Zone oo aad ugu faraxday natiijooyinka.
Waxaa jira faa iidooyin iyo faa iidooyin isticmaalka WordPress ah ee ku jira Ganacsiga. Waxaan jeclaan lahaa waayo-aragnimada WordPress iyo tartanka. Waxaad leedahay baabuur (WordPress), darawal (shaqaalahaaga), mashiinkaaga (mawduucyada iyo fiilooyinka), iyo tartankaaga (kaabayaashaaga). Haddii mid uun ka mid ah waxyaalahan la waayo, waad luminaysaa tartanka. Waxaan daawanay shirkado badan oo waaweyn oo ku fashilmay socdaalka WordPress oo eedeeynaya WordPress; hase yeeshe, waligeen waligeen ma arkin arinta dhabta ah WordPress.
Faa'iidooyinka WordPress ee Ganacsiga
Tababarka - Haddii aad u baahato wax caawimaad ah, WordPress.org waxay leedahay tan badan oo kheyraad ah, Youtube waxay leedahay tiro fiidiyowyo ah, waxaa jira barnaamijyo tababareed oo ka socda webka oo dhan, natiijooyinka Google-na waxay ka helayaan malaayiin maqaallo ah. Ma aha in la xuso kuweenna Qoraalada WordPress, Dabcan.
Habka Isticmaalka - In kastoo aysan sahlaneyn marka hore sameynta, soosaarida waxyaabaha ku jira WordPress waa shay. Tifatirahoodu si aad ah ayuu u adag yahay (in kasta oo ay i dhibayso in h1, h2, iyo h3 cinwaanada iyo hoosaadyada wali kumuu jirin koodhka).
Helitaanka Kheyraadka - Raadinta ilaha kale ee horumarinta CMS waxay noqon kartaa caqabad dhab ah, laakiin WordPress waxay joogaan meel walba. Digniin: Taasi sidoo kale waxay noqon kartaa dhibaato… waxaa jira wax badan oo horumariyayaal iyo hay'ado horumariya xalal aad u liita oo ku jira WordPress.
Isdhexgalka - Haddii aad isku dayeyso inaad ku darto foomam ama aad dhex gasho wax uun, waxaad caadi ahaan ka heli doontaa is-dhexgalka wax soo saarka ee WordPress marka hore. Samee baaritaanka ah galka plugin idman ama goob sida Xeerka Canyon, wax badan oo aadan heli doonin ma jiraan!
Customization - Mawduucyada WordPress, plugins, widgets, iyo noocyada boostada ee caadiga ah waxay bixiyaan qaddarin aan xad lahayn oo dabacsanaan ah. WordPress wuxuu u shaqeeyaa si adag inuu yeesho a taxane ah APIs taas oo koobeysa dhinac kasta oo ka mid ah barxadda.
Qasaarooyinka WordPress ee Ganacsiga
Dhiciyaan - WordPress waa wanaagsan ka soo baxa sanduuqa marka ay timaaddo hagaajinta mashiinka raadinta, laakiin ma fiicna. Waxay dhawaan kudareen khariidado bogaggooda ah Fidinta jetpack, laakiin kaliya ma ahan mid xoogan sida Qalabka SEO-ga ee Yoast.
Performance - WordPress waxaa ka maqan wax ka qabashada keydka xogta iyo keydinta bogga, laakiin waxaad si sahal ah uga dhigi kartaa tan adoo adeegsanaya Marti-geliye WordPress ah oo la Maareeyay. Waxaan u baahnaan lahaa xal kasta si aan u helo keyd otomaatig ah, keydinta bogga, aaladaha keydka keydka, diiwaanada qaladka iyo hufnaanta si loo xaqiijiyo guushaada.
caalami (I18N) - WordPress documents sida loo caalamiyeeyo mawduucyadaada iyo waxyaabaha aad isku xirto, laakiin waxaa ka maqan awood ay kula midoobi karaan waxyaabaha ku kooban nidaamka. Waan hirgelinay WPML tan awgeedna guul ayuu gaadhay.
Ammaanka - Markaad awood siinayso 25% shabakadda, waxaad bartilmaameed weyn u tahay jabsiga. Mar labaad, qaar ka mid ah martigelinta la maareeyay waxay bixisaa qalab otomaatig ah iyo cusbooneysiinta mawduuca markay arrimaha nabadgelyadu soo baxaan. Waxaan aad ugula talin lahaa in la dhiso mowduucyada ilmaha si aad u sii wadi karto cusboonaysiinta mawduucaaga waalid ee aad taageerto si aad uga fogaato inaad geliso bartaada halista mawduuc aan la cusbooneysiin karin.
Koodhka aasaasiga ah - Mawduucyada badanaa waxaa loo sameeyay naqshad weyn, laakiin waxaa ka maqan horumar casri ah oo ku saabsan xawaaraha, hagaajinta, iyo qaabeynta. Waxay si toos ah u xumeyn kartaa sida liidata ee loo yaqaan 'plugins' iyo mawduucyada loo horumariyo. Badanaa waxaan isku aragnaa inaan dib uqorno shaqeynta mowduucyada (sabab kale oo loo adeegsado mowduucyada carruurta).
hayaan - WordPress wuxuu bixiyaa xal lacag bixin ah, VaultPress kaydinta goobta ka baxsan laakiin waxaan la yaabanahay imisa shirkadood oo aan ogayn inaysan ahayn muuqaal ka baxsan sanduuqa oo ay u baahan tahay inay bixiso martidaada ama adeeg dheeri ah.
WordPress waxay horumar ka sameyneysaa ganacsiyada dhexdhexaadka ah iyo kuwa waaweyn, halkan waxaa ku yaal stats ka yimid Pantheon.
Tags: ganacsiqoraalka wordpressWordPresswordpress qasaarooyinkawordpress faaiidofaa'iidooyinka iyo khasaaraha wordpress
Pantheon: WordPress culus ama Drupal Hosting oo leh Relic Cusub
Talooyinka Ku-habboonaynta Bogga Soo Degidda ee Kordhiya Qiimaha Beddelka